Canada weputara asambodo njem ọgwụ mgbochi COVID-19 ọhụrụ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada » Canada weputara asambodo njem ọgwụ mgbochi COVID-19 ọhụrụ
Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ na -agbasa akụkọ Canada • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Ahụike • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Safety • Technology • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Canada weputara asambodo njem ọgwụ mgbochi COVID-19 ọhụrụ.
Akwụkwọ njem dijitalụ ọhụrụ nke Canada ga -enwe koodu QR maka nyocha na ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ oloko na ebe ntinye ndị ọzọ.
Akwụkwọ asambodo ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ga-enwe akara njirimara Canada ma zute ụkpụrụ kaadị kredit smart mba ụwa niile.
Akwụkwọ a ga-agụnye aha mmadụ, ụbọchị ọmụmụ na akụkọ gbasara ọgwụ mgbochi COVID-19-gụnyere usoro onunu mmadụ nwetara na mgbe a gbara ya ọgwụ.
Ndị Canada agaghị enwe ike ịbanye ụgbọ elu maka njem mba ofesi ma ọ bụ nke ụlọ na-enweghị asambodo ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa malite na Nọvemba 30.
Ndi Canada Prime Minista Justin Trudeau kwuputara taa na gọọmentị mba ahụ na-ewepụta asambodo njem ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 ọhụrụ.
"Ka ndị Canada na-achọ ịmalite njem ọzọ, a ga-enwe asambodo asambodo ịgba ọgwụ mgbochi," Trudeau kwuru, na -agba ndị Canada na -emebeghị otu a ka ha gbaa ọgwụ mgbochi ozugbo enwere ike. "Anyị nwere ike kwụsị ọrịa a wee laghachi n'ihe anyị hụrụ n'anya."
Gọọmentị mba ga -akwụ ụgwọ maka ịwepụta paspọtụ ịgba ọgwụ mgbochi, Trudeau kwuru. "Anyị ga -emeri taabụ."
In Canada, nlekọta ahụike bụ nke gọọmentị mpaghara na -enyekarị ya, ọ na -enwetakwa ego site n'aka gọọmentị mba, mgbe ụfọdụ na -ebute esemokwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị gbasara ikike na onye na -akwụ ụgwọ ihe.
Ụfọdụ ógbè, gụnyere Saskatchewan, Ontario, Quebec, Nova Scotia, Newfoundland na Labrador na mpaghara ugwu atọ niile, amalitelarị iji ụkpụrụ mba maka asambodo ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, Trudeau kwuru.
Akwụkwọ njem dijitalụ ọhụrụ, nke akpọrọ Passport Vaccine, ga -enwe koodu QR maka inyocha n'ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ oloko na ebe mbata ndị ọzọ.
November 29, 2021 na 06: 11
Anyị maara, Canada na-ewepụta paspọtụ ịgba ọgwụ mgbochi COVID-19 iji mee ka ọ dịrị ụmụ amaala mfe ịga mba ọzọ, Prime Minista Justin Trudeau kwupụtara. Akwụkwọ dijitalụ ekpughere na Tọzdee ga-enwe koodu QR maka nyocha na ọdụ ụgbọ elu, ọdụ ụgbọ oloko na ebe ntinye ndị ọzọ. Dị ka ọgwụ mgbochi ọhụrụ na-apụta maka ndị njem, anyị na-arụ ọrụ iji hụ na ndị na-eme njem nwere ohere nke a pụrụ ịdabere na ya.